တရုတ်ဝါးပျံ့, ဝါးရေနံပျံ့, ဝါးမရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း
Shenzhen Dituo Electronic Co.,Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်:61% - 70% Cert:ISO9001, CE, EMC, FCC, MSDS, REACH, RoHS, Test Report ဖေါ်ပြချက်:ဝါးပျံ့,ဝါးရေနံပျံ့,ဝါးမရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့,ရနံ့ကုထုံပျံ့,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > ဝါးပျံ့
ဝါးပျံ့ ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, ဝါးပျံ့, ဝါးရေနံပျံ့ ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, ဝါးမရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
အစစ်အမှန်ဝါးအကောင်းဆုံးရနံ့ကုထုံးဆီ Ultrasonic ပျံ့
Ultrasonic Cool မြူဝါးအနံ့ Diffuser လူငယ်လူနေမှု
ပစ်မှတ် Bamboo အစေ့အိတ်ဆောင် Ultrasonic Cool Mist စိုထိုင်းဆ
ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော Bamboo Pattern Mini Fragrance Air Diffuser
ဝါး Ultrasonic ရနံ့ကုထုံမရှိမဖြစ်ရေနံအနံ့ပျံ့
2019 ခုနှစ်ဝါးပျံ့မရှိမဖြစ်ရေနံ Ultrasonic
ပြောင်မြောက်ဒီဇိုင်းဝါး Ultrasonic အနံ့ပျံ့
ဝါးရနံ့ကုထုံမရှိမဖြစ်ရေနံ Air ကိုပျံ့နှံ့
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 16.77 - 18.15 / Piece/Pieces
ထုပ်ပိုး: အတွင်းသေတ္တာ - ၁၅၀ * ၁၅၀ * ၁၉၅ မီလီမီတာ; မာစတာပုံး: 46.5 * 31.5 * 41cm / 24pcs
အစစ်အမှန်ဝါးအကောင်းဆုံးရနံ့ကုထုံးဆီ Ultrasonic ပျံ့ 1.Ultrasonic ပျံ့စွမ်း - 280ml ။ 2.Bamboo Diffuser Material: ABS + PP + Bamboo ။ 3. Aroma ပျံ့နှံ့ချိန် - ၁၀ နာရီအထိ၊ အခိုးအငွေ့သုံးမျိုး - ၃ နာရီ၊ ၆ နာရီ၊ စဉ်ဆက်မပြတ်မြူဆိုင်းခြင်း။ ၄။...
လက်မှတ်: ISO9001, CE, ROHS, FCC, BSCI
Ultrasonic Cool မြူဝါးအနံ့ Diffuser လူငယ်လူနေမှု သင်သည်ပတ်ဝန်းကျင်အလင်းပြောင်းလဲမှု (၇) မျိုးရွေးချယ်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ်ညအလင်းရောင်တစ်ခုတည်းအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သင် aromatherapy စက်ထဲသို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများကိုထည့်နိုင်သည်။...
ထုပ်ပိုး: အတွင်းသေတ္တာ - ၁၁၀ * ၁၁၀ * ၁၉၀ မီလီမီတာ; မာစတာပုံး: 41.5 * 31.5 * 40cm / 24pcs
ပစ်မှတ် Bamboo အစေ့အိတ်ဆောင် Ultrasonic Cool Mist Humidifier မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံရနံ့ကုထုံးစက်သည်ညဘက်အလင်းရောင်၏လုပ်ဆောင်ချက်သာမကစိတ်ဖိစီးမှုကိုသက်သာစေပြီးအိပ်စက်ခြင်းနှင့်ဘဝအရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေသည့်ရနံ့ကုထုံးနှင့်စိုစွတ်စေသောလုပ်ဆောင်ချက်များလည်းရှိသည်။ အနံ့မွှေးပျံ့နှံ့သောမူလမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီ၏အမွှေးအကြိုင်သည်...
ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော Bamboo Pattern Mini Fragrance Air Diffuser ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှလူတို့၏ဘဝသည်ရေခဲသေတ္တာများနှင့်ရောင်စုံတီဗွီများမှမီးခွက်များ၊ စားပွဲများနှင့်ကုလားထိုင်များအထိအရည်အသွေးပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်။ ပြည်သူ့ဘ ၀ နှင့် ပတ်သက်၍...
ဝါးရနံ့ကုထုံးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့ ပိုမိုမြန်ဆန်သောမြန်ဆန်သောဘဝလမ်းစဉ်သည်လူတိုင်းကိုရုပ်ဝတ္ထုကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုများစွာဖြစ်စေသည်၊ ငါ့ပတ် ၀ န်းကျင်ကလူတွေကနှေးကွေးပြီးအေးဆေးငြိမ်သက်တဲ့အချိန်ကိုမရရှိနိုင်ကြဘူး။ သူတို့သည်ညဘက်သန်းခေါင်ယံတွင်ပင်စိုးရိမ်စိတ်၊ စိတ်တိုခြင်း၊ မငြိမ်သက်မှုများကိုခံစားရနိုင်ပြီးအိပ်စက်ခြင်း၊...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 10.46 - 9.54 / Piece/Pieces
ထုပ်ပိုး: အတွင်းစိတ်သေတ္တာ: * 110 110 * 190mm; မာစတာစက္ဏူထူ: 41.5 * 31.5 * 40cm / 24pcs
ဝါး Ultrasonic ရနံ့ကုထုံမရှိမဖြစ်ရေနံအနံ့ပျံ့ အမြင့်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်း & sooth မြူခိုး: ဝါးပျံ့, မဆိုအခန်းထဲမှာပုံစံမျိုးကိုက်ညီ။ အစစ်အမှန်ဝါးနဲ့တူလှပါတယ်။ စာနယ်ဇင်းစဉ်ဆက်မပြတ်အခိုးအငွေ့ mode ကိုသို့မဟုတ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအခိုးအငွေ့ mode ကို (အသက် 30 တွင်နှင့်အသက် 30 ဟာ Off) ကို select ဖို့အခိုးအငွေ့ခလုတ်ကို။...
ထုပ်ပိုး: အတွင်းစိတ်သေတ္တာ: * 150 150 * 195mm; မာစတာစက္ဏူထူ: 46.5 * 31.5 * 41cm / 24pcs
2019 ခုနှစ်ဝါးပျံ့မရှိမဖြစ်ရေနံ Ultrasonic တဦးတည်းအရောင်မှ fixed သို့မဟုတ်ပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်အလင်းကုထုံးနှင့်အတူအနံ့ပျံ့အေးမြသောအခိုးအငွေ့ကိုအသုံးပြုသည်ပူရရှိသွားတဲ့ဒီတော့ဘယ်တော့မှမ။ ဘယ်လိုသုံးစွဲဖို့: ဒါကြောင့်လွယ်ကူ, ဦးထုပ်မျှော်ထဲတွင် Plug ။ ယင်းမက်စ်လိုင်းနှင့်သင့်အကြိုက်ဆုံးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများ 3...
ပြောင်မြောက်ဒီဇိုင်းဝါး Ultrasonic အနံ့ပျံ့ Ultrasonic ပျံ့သူ၏လှိုင်းတံပိုးတို့သည်အဆီများလေသို့အခိုးအငွေ့အဖြစ်အငွေ့ပျံစေ ultrasonic စွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုပါ။ ဒါကပျံ့နှံ့နည်းလမ်းအပူအသုံးချပေမယ့်အစားအေးအခိုးအငွေ့ထုတ်လုပ်မထားဘူး။ အပူတစ်ခုမရှိမဖြစ်ရေနံ၏သမာဓိနှင့်ဘက်စုံဂုဏ်သတ္တိများဆိုးရွားနိုင်ပါတယ်အဖြစ် Aromatherapists,...
ဝါးရနံ့ကုထုံမရှိမဖြစ်ရေနံ Air ကိုပျံ့နှံ့ ရနံ့ကုထုံအတွက် Ultrasonic Atom တစ်ခုကျိုးကြောင်းဆီလျော်ကုန်ကျစရိတ်မှာတနေ့လုံးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီခိုင်ခံ့သောအမွှေးအကြိုင်စောင့်ရှောက်;: သင့်မူလစာမျက်နှာ de-နံ လေထုအိပ်ပျော်နေသောတစ်ဦးညာဘက် setting, အာရုံကူညီပေးနေ, သရုပ်ြပ, လျှော့ပေါ့။ ဒါ့အပြင်တစ်ဦးအေးမြခိုးအငွေ့...
တရုတ်နိုင်ငံ ဝါးပျံ့ ပေးသွင်း
1. ရာထူးဝါးပျံ့ဖြောင့်မတ်, အဖုံးကိုဖယ်ရှားဒေါင်လိုက်အထက်သို့ Pull ။
အဆိုပါဝါးရေနံပျံ့၏အခြေစိုက်စခန်းမှာ, DC input ကိုပေါက်သို့ 2. Connect ကို AC adapter ပါဝါကြိုး။ ဒါဟာထောက်ပံ့လမ်းကြောင်းကနေတဆင့်လမ်းကြောင်း cable ကိုမှအကြံပြုထားသည်။
3. '' MAX '' လိုင်း၏မပိုလျှံရနံ့ကုထုံ diffuser.DO သို့ရေနှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံထည့်ပါ။ ပွက်ပွက်ဆူနေသောရေမသုံးပါ။ အာဏာအခါဖြည့်ပါမပါနှင့်။ ဒါဟာရေတစ်ခုချင်းစီကို 100ml များအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီ 2-3 ပေါက်ကိုထည့်သွင်းဖို့အကြံပြုသည်။
4. နောက်ကျောအဖုံးထားပါ။ မျိုးတွင်တပ်မက်လိုချင်သောအလမျးညှနျခသို့အနံ့လမ်းပြချိန်ညှိသည်။ ဝါးမရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့မျက်နှာဖုံးမပါဘဲ operated ခြင်းကိုမရပေမည်။
5. မြို့ရိုးကို socket ကနေပါဝါနှင့်အတူ AC adapter ချိတ်ဆက်ပါ။
6. စာနယ်ဇင်းလိုအပ်အဖြစ် (စဉ်ဆက်မပြတ် /3နာရီ /6နာရီကိုလေပေါ်မှာပ ON) ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အချိန်ကိုရွေးပါရန် "အခိုးအငွေ့" ခလုတ်ကို။ အဆိုပါပျံ့အလိုအလျောက်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်တွင်ကို turn off ပါလိမ့်မယ်။ ချက်ချင်းကို turn off စေရန်, ရှည်လျား၏ "အခိုးအငွေ့" ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
LED အလင်းပေါ်ပြောင်း 7. စာနယ်ဇင်း "LIGHT" ။ Brightness ကိုအောက်ပါသံသရာ (တောက်ပ-Dim-OFF) မှတဆင့်ချိန်ကိုက်သည်။
9. တန်ခိုးနှင့်ဆက်သွယ်သည့်အခါ, ultrasonic ပျံ့၏မူရင်းအခြေအနေကိုချွတ်နေတုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
မလုံလောက်သောရေလည်းမရှိသည့်အခါ 10. အခိုးအငွေ့စစ်ဆင်ရေးနှင့်အလင်းအနံ့ပျံ့အော်တိုကိုလည်းပိတ်ထားသည်ကိုပင် "အခိုးအငွေ့" ကိုနှိပ်, အလိုအလျှောက်ပိတ်ပါလိမ့်မယ်။
ပန်းအိုးဒီဇိုင်း 400ml Ultrasonic မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံမြူပျံ့
အကောင်းဆုံးသစ်သားအစေ့ Smart အိမ်သုံး Ultrasonic စိုထိုင်းဆ
အကောင်းဆုံးက Ultra Sonic Humidifier အနံ့ပျံ့ဘလူးတုသ်
ကြီးမားသောအခန်းအိပ်ခန်းအတွက် Glass Room Diffuser Humidifiers များ
High Quality အရောင်အသွေးစုံသော Glass ကိုမရှိမဖြစ်ရေနံအနံ့ပျံ့
အကောင်းဆုံး USB Aroma Essential Oil Nebulizing Diffuser
အနံ့အသစ်ပါသော Resin Air Humidifier အသစ်
100ML USB ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးလျှပ်စစ်လျှပ်စစ်အိတ်ဆောင်နူဘိုင်ပျံ့
ညဉ့်အလင်းနှင့်အတူစမတ်အိမ်သုံးပစ္စည်းများ Aroma ပျံ့နှံ့
Ultrasonic Mini ကိုဝါသနာရှင် Wood ကကောက်ပဲသီးနှံ Humidifier
High Quality Mini ကိုအိတ်ဆောင် Atom Air ကို Humidifier